थोक आवश्यक तेल डिफ्यूजर, ह्युमिडिफायर आपूर्ति अरोमाइजी
नि: शुल्क सुरू गर्नुहोस्
एकल अत्यावश्यक तेल
नेबुलाइजर तेल विसारक
अत्यावश्यक तेल ब्याग
निजी लेबल | एक ब्रान्ड बनाउनुहोस् | न्यूनतम
थोक बिक्रेता बन्नुहोस्
निजी लेबल सुरु गर्नुहोस्
Dropshipping सुरु गर्नुहोस्
Dropshipping सेटअप शुल्क
एकीकरण shopify आदेश
नमूनाहरू प्राप्त गर्नुहोस्
अब नमूनाहरू प्राप्त गर्नुहोस्
एक ब्रान्ड निर्माण गर्नुहोस्
* हामी पर्दाको पछाडि सबै काम गर्छौं
* तपाईं आफ्नो व्यापार बढ्दैमा ध्यान दिनुहुन्छ
सबै भन्दा राम्रो थोक मूल्य आवश्यक तेल विसारक
हामी कसरी आफ्नो व्यवसाय बढाउन सक्छौं?
यदि तपाईं एक उत्पादन मा $ 500 भन्दा अधिक लगानी गर्न सक्षम हुनुहुन्छ भने, हामी तपाईंको उत्पादनहरू बनाउन, प्याकेजिंगहरू अनुकूलित गर्न, र तपाईंको ब्रान्ड सपनाहरू प्राप्त गर्न मद्दत गर्न सक्छौं।
हामी तपाइँको सबै ecommerce आवश्यक्ताहरु को सेवा पुर्‍याउन सक्छौं, निजी लेबलिंग, FNSKU स्टिकर, अमेजन शिपिंग, शॉपफा विक्रेताको लागि चीनबाट ड्रपशिपिंग सहित।
एक विक्रेता को रूप मा, तपाईं आफ्नो प्रतिस्पर्धा जस्तै उस्तै उत्पादनहरू प्रस्ताव आउँनुहुनेछ। निश्चित, कम मूल्य निर्धारणले तपाईंलाई थप आकर्षक बनाउँदछ, तर तपाईं अन्ततः तपाईंको व्यवसायलाई लाभहीन बनाउनुहुनेछ। सरल ब्रान्डिंगको साथ प्याकेजि ofको शक्तिलाई कम नबनाउनुहोस्। हामीले ड्रपशिपर्स, साना व्यवसायहरू र सबैजना बीचमा बनाएका छौं।
हामीले "खराब काम" गर्यौं ताकि तपाईं मार्केटिंगमा ध्यान दिन सक्नुहुन्छ!
कस्टम लेबल आवश्यक छ? हामीले तपाईंलाई कभर गर्यौं। हामी व्यावसायिक डिजाइन सेवाहरू र टर्नकी कस्टम निजी लेबलको उत्पादनहरू ठूलो रनमा पनि प्रस्ताव गर्न सक्छौं।
अरोमाएसीको उत्पाद पृष्ठले मूल्यहरूको स्पष्ट दायरा प्रदान गर्दछ जहाँ थोक बिक्रेताहरू
बिक्री आवश्यकताहरू अनुसार फरक प्रस्तावहरू प्राप्त गर्न सक्दछ। हामीसँग अनलाइन सेवा सेवा पनि प्रस्ताव गर्दछौं यदि तपाईंसँग फरक उत्पाद मिक्स आवश्यकताहरू वा ठूला अर्डरहरू छन् भने
यदि तपाईंसँग एक उत्पाद विचार (किकस्टार्ट, क्राउडफन्डि)) छ, तर कसरी यसलाई उत्पादन गर्ने थाहा छैन, हामी तपाईंलाई चरण-देखि चरणबद्ध गर्दछौं।
हामी कम मूल्य, २० व्यक्तिको टीम, र बढि समाधानहरू तपाईंको बढ्दो ब्यापारलाई समर्थन गर्नका लागि प्रस्ताव गर्न सक्छौं।
निष्पक्ष मूल्य निर्धारण
हाम्रो मूल्य निर्धारण संरचना पारदर्शी छ र यसमा कुनै गोप्य लागत छैन। हाम्रो मुल्य विश्वमा सब भन्दा प्रतिस्पर्धी हो, र अन्य अमेरिकी वा युरोपेली कपडाले सामान्यतया तपाईले चार्ज गरेको भन्दा केहि अंश हो। कम-मात्रा बनावट र विधानसभा आवश्यकता। हामी तपाईंको पैसा र समय बचत गर्न सक्दो प्रयास गर्दछौं।
वर्षहरुमा हामी गर्व गर्छौं कि time 99% को एक अन-टाइम डेलिभरी दर राख्दछौं। तपाईं गति र बजेट को सन्तुलनको लागि DHL र अन्य कूरियर सेवाहरू छनौट गर्न सक्नुहुनेछ। हामी केवल भरोसेमंद र सम्मानित कम्पनीहरूबाट सेवाहरू प्रयोग गर्दछौं।
२ hours घण्टा ग्राहक सेवा
जब तपाईंसँग कुनै समस्याहरू छन्, तपाईं जहिले पनि प्रत्यक्ष ग्राहक सेवा व्यक्तिको पहुँच गर्न सक्नुहुन्छ तपाईंको ईमेल वा सन्देशहरूको जवाफ दिन।
ड्रप शिपिंग कार्यक्रम
तपाईं यसलाई बेच्नुहोस्, हामी शिप,
तपाईं लाभ राख्नुहोस्।
अहिले सुरू गर्नुहोस्
तपाईका अर्डरहरू सिधा अमेजन पूर्ति केन्द्रहरूमा पठाइयो। वैकल्पिक इन-हाउस ब्रान्डि and र बन्डलिंग उपलब्ध छ।
अत्यावश्यक तेल किट
थोक आवश्यक तेलों
Natura लकड़ी विसारक
आवश्यक तेल भण्डारण
थ्रीडी गिलास विसारक
थोक आवश्यक तेल विसारकको बारेमा भिडियो
थोक अत्यावश्यक तेल विसारकको सबैभन्दा लोकप्रिय
शीर्ष - - १० मिलीलीटर आवश्यक तेल E6 अत्यावश्यक तेल एरोमाथेरापी स्टार्टर किट
थोक सेतो एसेंशियल तेल सुगन्ध विसारक X125A (पानी)
निर्माताबाट विसारक र आवश्यक तेल खरीद गर्दा के तपाईं मुद्दाहरूको अनुभव गर्नुहुन्छ?
विश्वासयोग्य आवश्यक तेल आपूर्तिकर्ता खोज्न र छनौट गर्न गाह्रो छ।
यस बजारबाट आवश्यक तेलहरूको असमान गुणस्तर, केही आपूर्तिकर्ताहरूले आवश्यक तेलहरूको शुद्धता र जीवनकालको ग्यारेन्टी गर्न सक्छन्। अझ के, आवश्यक तेलहरू एफडीएको नियमनमा छैनन्।
केहि आपूर्तिकर्ताहरुबाट आवश्यक तेलको लामो नेतृत्व समय, र डेलिभरी समय गैर-ग्यारेन्टी हुन्छ।
जब तपाईं आवश्यक तेल विसारकको साथ प्राविधिक मुद्दाहरूको सामना गर्नुहुन्छ थोरै आपूर्तिकर्ताहरूले समाधानहरू प्रदान गर्दछ।
यद्यपि धेरै आपूर्तिकर्ताहरूले दावी गर्छन् कि तिनीहरूले साना कम्पनीहरूको ख्याल राख्दछन्, प्रायः वास्तवमा गर्दैनन्।
थोरै आपूर्तिकर्तासँग आवश्यक तेल विसारक डिजाइन, निर्माण, बिक्री, व्यापार विकास, प्राविधिक समर्थन, र बिक्री पछि सेवाको साथ पूर्ण सेवा छ।
Aromaeasy किन छनौट गर्नुहोस्
थोक मूल्यमा उच्च-गुण आवश्यक तेल र डिफ्यूजरहरू हामीसँग चीन विसारक उद्योगमा सबै भन्दा राम्रो विसारक वर्कशॉप छ, र आवश्यक तेलहरू ग्लोबल फार्महरूबाट प्राप्त।
हाम्रो उत्पादन टोलीले UL, ETL, TUV, ISO, KC, IC, SAA, C-Tick, RoHS, FCC, CE & GS मापदण्डहरूको पालना गर्दछ, र गुणवत्ता सुनिश्चित गर्न डिजाइनरहरू र कामदारहरूको व्यवस्थापन गर्दछ।
कच्चा माल खरीददेखि उत्पादनसम्म, AromaEasy सँग गुणस्तर निरीक्षणको साथ उत्तम व्यवस्थापन प्रणाली छ। हामी तपाईको ब्यापार बृद्धि गर्न मद्दत गर्दछौं हामी तपाईको ब्यापारको ख्याल गर्छौं!
अरोमाएसीसँग पेशेवर प्राविधिक कर्मीहरू छन् जसले तपाईंलाई कर्मचारी प्रशिक्षण र प्राविधिक सल्लाहकार सेवाहरू प्रदान गर्दछ तपाईंको व्यापार बढाउन मद्दत गर्न। र यी सेवाहरू नि: शुल्क छन्।
हाम्रो ब्यापार वृद्धि तपाईको ब्यापारको ग्रोथमा आधारित छ। प्रोफेशनल रसद र वितरण हामी प्रत्येक फरक प्रकारको र ब्यापारको आकारका लागि आवश्यक उत्तम कुरियर सेवा बुझ्छौं।
अरोमाएसीसँग पेशेवर रसद र वितरण छ, सही समयमा वितरणको साथ तपाईंको उत्पादनहरू सुनिश्चित गर्न। एक-टु-वन समर्थन सेवा २ 24/7 तपाईंको लागि व्यावसायिक पेशेवर बिक्री टीम नियमित रूपमा इन्टरनेट द्वारा भ्रमण गर्दछ, २ response घण्टा भित्र द्रुत प्रतिक्रिया।
हाम्रो ग्लोबल फार्म
AromaEasy विश्वव्यापी भरपर्दो उत्पादकहरूसँग काम गर्दछ, हाम्रो आवश्यक तेलोंको गुणवत्ताको ग्यारेन्टी गर्न। त्यो मात्र सुरुवात हो।
हामीले छवटा महाद्वीपमा प्रत्येक प्राथमिक कारखानाको लागि ल्याबहरू स्थापना गरेका छौं, प्रत्येक ग्राहकले शुद्धतम आवश्यक तेल पाउनेछ भन्ने सुनिश्चित गर्न।
साथै, हामी हाम्रो उच्च स्तरहरू हामी सँगै काम गर्ने सबैमा ल्याउँदछौं, आपूर्तिकर्ताओंलाई उनीहरूको अभ्यासहरूमा सुधार गर्न अग्रणी गर्न जुन हाम्रो मानकसँग रहनको लागि।
हामी तपाईंलाई धेरै राम्रो आपूर्ति गर्छौं, र हामी आज भन्दा पनि भोलि राम्रा हुन प्रतिबद्ध छौं।
सर्वश्रेष्ठ बेच्ने थोक आवश्यक तेल विसारक
हाम्रो कोटीहरू ब्राउज गर्नुहोस्
आवश्यक तेल झोला
१००% शुद्ध आवश्यक तेल
थोक आवश्यक तेल विसारकको उत्पादन लाइन
AromaEasy को उत्पादन लाइन प्रवाह अपरेशन, उच्च स्वचालन र उच्च उत्पादन दक्षता अपनाउँछ।
उत्पादन लाइनले प्रति महिना २००,००० भन्दा बढी सुगन्ध फैलावर्सको मात्रा पूरा गर्न सक्छ। र अब हामी विश्व भर बाट ग्राहकहरु लाई २ लाख सुगन्धित विसारकहरु उत्पादन गर्छौं।
अपरेटरहरूले व्यावसायिक प्रशिक्षणको अनुभव गरेका छन्। कुशल उत्पादन सीपहरू र त्यस्तै व्यावसायिक गुणस्तरले उच्च गुणवत्ता र लागत-प्रभावी गन्ध विसारकको उत्पादनको लागि एक विश्वसनीय ग्यारेन्टी प्रदान गर्दछ।
कम्पनीको उत्पादन कार्यशाला strictly एस विनिर्देश अनुसार कार्यशालाको सफाई, अर्डर, दक्षता र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न कडा हिसाबले प्रबन्ध गरिएको छ।
अहिले हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्
साझेदार हामी धन्यवादी हुनु पर्छ
पहिलो पटक अरोमाएसीमा कारोबार गर्दै। धेरै भरपर्दो विक्रेता र भरपर्दो र अमेरिका को लागी द्रुत शिपिंग। सबै प्रश्न तुरुन्त जवाफ दिए। AromaEasy बाट फेरि किन्ने छ! शुभकामना !.
AromaEasy को साथ किनमेल आश्चर्य र राम्रो र छिटो काम गर्दछ। यहाँ सम्म कि एक यातायात बीमा र सेवा अनुगमन शामिल छ।
धन्यबाद, यो हाम्रो पहिलो पटक वेबसाइट खरीद मा AromaEasy प्रयोग गर्न को लागी तपाईंको आश्वासन नीति संग, हामी सुरक्षित महसुस गर्छौं र तपाईंको सेवाहरूको साथ विश्वास। हामी भविष्यमा यो खरीदमा जारी राख्नेछौं।
थोक आवश्यक तेल विसारक
मलाई मेरो उत्पादनहरू स्रोतमा अरोमाइजी प्रयोग गर्न मनपर्दछ। तिनीहरू उच्च-गुणवत्ता आईटमहरू साथ साथै विक्रेताहरूसँग काम गर्न सजिलो छ र मेरो उच्च अपेक्षाहरू पूरा गर्न। साथै, मेरो प्याकेजहरू ट्र्याक गर्नाले संयुक्त राज्य अमेरिकामा पठाइएको वस्तुहरू प्राप्त गर्ने मेरो आशा सेट गर्न मद्दत गर्दछ।
AromaEasy® ले तपाईंलाई उत्तम अरोमाथेरापी उत्पादहरू तपाईंको भलाईइंग समर्थन गर्दछ।
अरोमाएसीसँग सुगन्ध फैलाव उद्योगमा १२ बर्ष भन्दा बढीको अनुभव छ। हामी थोक मूल्यमा विसारक र आवश्यक तेल आपूर्ति गर्दछौं, अन्य आपूर्तिकर्ताको अगुवाइ गर्दै। र हाम्रा अत्यावश्यक तेल विसारकहरू विश्वभर १ .० लाख प्रति वर्ष दरमा बेचिन्छन्। विकासको बर्ष पछि, AromaEasy एक समान व्यवसाय को उद्यम बीच अनुसन्धान र विकास मा एक अग्रणी स्थिति मा भएको छ। हामी प्रत्येक वर्ष 12० भन्दा बढी नयाँ प्रकारको सुगन्ध डिफ्यूजरहरू विकास गर्दछौं र तपाईंको लागि अनुकूलित सेवा प्रदान गर्दछौं।
हाम्रो गुणस्तर व्यवस्थापन प्रणालीको बारेमा
अरोमाएसीले प्रमाणपत्रहरूको एक श्रृंखला प्राप्त गर्यो जस्तै ISO9001, ISO14001, BSCI, र OHSAS18001। अरोमाएसीको प्रत्येक आवश्यक तेलहरू कठोर परीक्षणको माध्यमबाट जान्छन् कि तिनीहरू शुद्ध शुद्ध रूपमा बोतल राखिएका छन्, तिनीहरूलाई घरमा दूषित पदार्थ बिना, केमिकल वा पत्राशकहरू बिना तपाईंको घरमा पठाउँदै। सुरुबाट, AromaEasy ले यसलाई छुन्छ को जीवनमा कल्याण र खुशी ल्याउन कोसिस गर्दछ।
हाम्रो भर्खरको टेक्नोलोजीको बारेमा
अरोमाइजीले आवश्यक तेल र डिफ्यूजरहरू आपूर्ति गर्दछ 70,000०,०००+ प्रमुख रिटेलर, सैलून र उत्तर अमेरिका भरका होटलहरू। हामी अन्त प्रयोगकर्ताहरूको प्रतिक्रिया सुन्छौं तब नयाँ विचारहरू लाई फलदायी बनाउँदछौं, तपाईंको जीवनलाई राम्रो बनाउँदै।
अरोमा डिफ्यूजर होल्डर क्यारोसेल, अरोमाथेरापी किटहरू, स्टाइलिश सिरेमिक डिफ्यूजरहरू ब्लुटुथ® क्षमताहरू, नेबुलाइजिंग डिफ्यूजरहरू, र वायरलेस कार डिफ्यूजरहरू केवल केही उदाहरणहरू छन् जुन अरोमाएसीले विश्वमा खोलिदिएको छ। हाम्रो काम उच्च स्तरहरू तय गर्ने बारे हो ताकि हामी विश्वलाई राम्रो ठाउँ बनाउन सक्दछौं।
पूर्ण रूपमा बन्नुहोस्
AromaEasy थोक वा सम्बद्ध साझेदारीको साथ लगानीमा तपाईंको फिर्ती बढाउनुहोस्। यहाँ AromaEasy मा
नि: शुल्क खाता सिर्जना गर्नुहोस्
फिचर गरिएको ब्लग
१२+ फ्र्यान्कन्सेन्ज आवश्यक तेल लाभ र यसको व्यापक उपयोगहरू
लोबानस आवश्यक तेल लाभहरू आवश्यक तेलहरू हजारौं बर्षदेखि उनीहरूको [...]
कसरी घर मा हात सेनिटाइजर बनाउने
कसरी हात सेनिटाइजर बनाउने हो हो, महामारीलाई रोकथाम गर्न अहिलेसम्म केही पनि हात धुने कुटपिट गर्दैन [...]
छालाहरूको लागि आवश्यक तेल
यहाँ अरोमास्यासीको छोटो गाइड छ छालाहरूको छालाको लागि अत्यावश्यक तेलमा धेरै कष्टप्रद हुन सक्छ [...]
पछाडि दुखाइको लागि आवश्यक तेल
पीठो दुखाइको लागि अत्यावश्यक तेल एक अध्ययनले देखाउँछ कि लगभग percent० प्रतिशत अमेरिकीहरूले अनुभव गर्छन् [...]
आध्यात्मिक आवश्यक तेल
बोटबिरुवाबाट आवश्यक तेलहरूले आध्यात्मिक समारोहहरूमा सँधै भूमिका खेल्दछ, मानिसहरूलाई रहन मद्दत गर्दछ [...]
कीटाणु मार्न आवश्यक तेल
यहाँ अरोमास्यासीको संक्षिप्त मार्गनिर्देशनहरू छन् आवश्यक तेलहरूमा जीवाणुहरूलाई मार्नको लागि यस कठिन समयहरूमा, [...]
कसरी नुहाउने मा आवश्यक तेल प्रयोग गर्ने
यो पोष्ट कसरी नुहाउने मा आवश्यक तेल प्रयोग गर्ने मा AromaEasy परम मार्गदर्शक हो। [...]
पानी अवरोधका लागि आवश्यक तेल
यो पोष्ट पानीको प्राकृतिक उपचारका लागि आवश्यक तेलहरू छनौट गर्नका लागि मार्गनिर्देशन हो [...]
व्यापार विश्व भर मा
AromaEasy आफ्नो ब्रान्ड निर्माण गर्न
टेल / व्हाट्सएप / एसएमएस / स्काइप:
१16273२XNUMX। गेल AVE
उद्योग CA CA 91745 को शहर
दर्शन र मिसन
निष्पक्ष करार नियमहरू
ग्लोबल को लागी जिम्मेदारी
कुनै उपहार नीति छैन
प्रतिलिपि अधिकार © 2022 सुगन्ध